Na oge analog, ichikota data banyere omume-onye na-eme ihe, na mgbe-dị oke ọnụ, ya mere ọ dị obere. Ugbu a, na oge dijitalụ, a na-edekọ ọtụtụ ijeri mmadụ, echekwa, na nyochaa. Dịka ọmụmaatụ, oge ọ bụla ị pịrị na ebe nrụọrụ weebụ, kpọọ oku n'ekwentị gị, ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ihe dị na kaadị akwụmụgwọ gị, ihe ndekọ dijitalụ nke omume gị kere ma debe ya. Ebe ọ bụ na ụdị data a bụ ihe ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị, a na-akpọkarị ha dijitalụ . Na mgbakwunye na ihe ndị a nke azụmahịa, ụlọ ọrụ gọọmenti nwekwara nkọwa bara ụba banyere ndị mmadụ na ụlọ ọrụ. A na-akpọkarị azụmahịa ndị a na akwụkwọ ndekọ gọọmentị nnukwu data .
Mmiri nke nnukwu data na-ebili elu na-egosi na anyị esiwo n'ụwa ebe data data dị ụkọ na ụwa ebe ihe ndekọ omume dị ụba. Nzọụkwụ mbụ iji mụta ihe site na nnukwu data bụ ịmara na ọ bụ akụkụ nke ụdị data buru ibu nke ejiriwo maka nchọpụta mmadụ maka ọtụtụ afọ: data nyocha . N'ụzọ siri ike, data ncheta bụ data ọ bụla nke na-esi site n'ilekọta usoro mmekọrịta mmadụ na eze na-enweghị ihe ọ bụla. Ụzọ dị iche iche ị ga-eche banyere ya bụ na data ncheta bụ ihe niile anaghị agụnye iso ndị mmadụ na-ekwurịta okwu (dịka, nyocha, isiokwu nke isi 3) ma ọ bụ gbanwee gburugburu ndị mmadụ (dịka, nyocha, isiokwu nke isi 4). Ya mere, na mgbakwunye na akụkọ azụmahịa na ndekọ gọọmenti, data nyochaa gụnyere ihe dịka ederede akwụkwọ akụkọ na foto satịlaịtị.
Isi nke a nwere akụkụ atọ. Nke mbụ, na mpaghara 2.2, akọwapụtara m nnukwu ihe ọmụma data na nkọwa zuru oke ma dokwuo anya ọdịiche dị n'etiti ha na data ndị ejiri mee ihe maka nchọpụta mmadụ n'oge gara aga. Ekem, ke ikpehe 2.3, m na-akọwa njirimara iri nke nnukwu isi mmalite data. Ịghọta njirimara ndị a na-enyere gị aka ịmata ngwa ngwa na adịghị ike nke isi mmalite ndị dị na ya ga-enyere gị aka ijikwa ebe ọhụrụ ndị ga-adị n'ọdịnihu. N'ikpeazụ, na ngalaba nke 2.4, akọwapụtara m usoro nyocha atọ kachasị ike ị nwere ike iji mụta ihe site na data nhazi: ịkọ ihe, ịkọ ihe, na ịme ihe nnwale.